Weeraro Askar Lagu Dilay Gaadiidna Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Dalka Yemen. – Bogga Calamada.com
Weeraro Askar Lagu Dilay Gaadiidna Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Dalka Yemen.
January 8, 2018 6:27 pm Views: 92
Wararka ka imaanaya dalka Yemen waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah dalkaasi ay ka dhaceen weeraro kala duwan oo dhaliyay khasaara nafeed iyo mid hantiyadeed.
Weerarka Kowaad oo loo adeegsaday qaraxyo Miino waxaa lala beegsaday Labo gaari Cabdi Bile ah oo la socdeen maleeshiyaatka Xuuthiyiinta kuwaasi oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobalka Raddaac ee dhanka Konfur Bari dalka Yemen.
Miinooyinka ayaa waxyeelo xoogan gaarsiiyay Labada gaari ee Cabdi Bilaha ah,sidoo kale qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tiro ka tirsan maleeshiyaatka Xuuthiyiinta.
Weerarka Labaad oo isagana loo adeegsaday qarax Miino ayaa isla deegaan ka tirsan gobalka Raddaac waxaa lagula beegsaday maleeshiyaat ka tirsan Xuuthiyiinta,qaraxan waxaa lagu burburiyay gaariga Cabdi Bilaha waxaana lagu dilay Labo askari oo Xuuthiyiin ah Labo kalane waa lagu dhaawacay.
Weerarka Saddex-aad oo ahaa mid dagaal toos ah waxaa lagu qaaday fariisin maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ay ka sameysteen agagaarka deegaanka Jabalu Jafiinah oo ka tirsan gobalka Raddaac waxa uu dagaalkaasi oo socday muddo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ragga weerarka qaaday ayaa la wareegay gacan ku heynta fariisinka ay weerareen waxeyna ku dileen Saddex- askari oo maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ah waxeyna nolasha ku qabteen hal askari oo isla maleeshiyaatka Xuuthiyiinta ah.
Sidoo kale Ragga hubeysan ee weerarkaasi qaaday intii dagaalka uu socday gubeen gaari Cabdi Bile ah iyo Mooto oo ay lahaayeen maleeshiyaatkii Xuuthiyiinta ee lagu weeraray fariisinkaasi.
Weerarka Afaraad waxa lagu qaaday saldhig uu ku sugnaay sarkaal ka tirsan daba dhilifka Yemen kaasi oo ka barbar dagaalamaya maleeshiyaatka Shiicada Xuuthiyiinta ee duulaanka ku qabsaday qeybo ka mid ah dalka Yemen,saldhiga sida gaarka ah loo weeraray waxa uu ku yaala Tuulo hoostagta deegaanka Qeyfah ee gobalka Raddaac ee Konfur Bari dalkaasi.
Weerarka Shanaad oo isugu jira duqeyn iyo qarax waxaa lagu qaaday fariisimo maleeshiyaatka daba dhilifka Yemen ee ay tababartay dowlada Cadowga ah ee Imaaraatka Carabta ay ka sameysteen deegaano ka kala tirsan gobalada Shabwah iyo Abyan,waxeyna weeraradaasi sababeen khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay maleeshiyaatka ay tababartay dowlada Ridada Imaaraatka Carabta.
Guud ahaan weeraradan ka kala dhacay gobalada Raddaac,Abyan iyo Shabwah waxaa mas’uuliyadooda sheegtay Mujaahidiinta Ansaaru Shareecah ee ka dagaalanta dalka Yemen kuwaasi oo ah Mujaahidiin taabacsan Mujaahidiinta Al-qaacidah ee dhulka Jaziiratul Carab.